निर्मला हत्या प्रकरण : यो भन्दा ठूलाे दसी प्रमाण के हुन सक्छ सरकार ? « News24 : Premium News Channel
निर्मला हत्या प्रकरण : यो भन्दा ठूलाे दसी प्रमाण के हुन सक्छ सरकार ?
प्रकाशित मिति : Sep 02, 2018
२ महिना नबित्दै हुगजिल्ट लाई दोषी ठहर गर्दै गोली हानी हत्या गरियो । ९ वर्ष पछि अर्को बलात्कारीले हुगजिल्ट निर्दोष छ भन्दै सार्वजनिक शौचालयमा भएको बलात्कार मैले गरेको हो भनेर स्वीकार गर्यो ।
मृत्युदणड समाधान होइन त्ससमाथि हाम्रो जस्तो राजनैतिक अस्थिरताले जकडिएको मुलुकको निम्ति मृत्युदण्ड श्राप हो । सीमान्तकृत माथि दोषारोपण गरेर ठुलाठालु जोगाउन सहयोग गर्ने कसी हो । दण्डहीनता मौलाउन सहयोगी युरिया हो । जसले तल्लो बर्गलार्इ नै निचोर्ने शिवाय केही गर्न सक्दैन । त्यसैले मृत्युदण्ड अर्को अभिषाप हो । महाअपराध हो ।